သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်ထုတ် အရက်ပုလင်းများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် 'အသက်ကယ်ပါ' ဆိုသည်? - Yangon Media Group
သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်ထုတ် အရက်ပုလင်းများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် ‘အသက်ကယ်ပါ’ ဆိုသည်?
အင်ကာရာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၂
သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရတို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လွန်ဆွဲကြပြီးနောက် ၎င်းတို့နိုင်ငံထုတ် အရက်ပုလင်းများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် သတိပေးစာတန်းကို မဖြစ်မနေကပ်ပေးထားရမည်ဟု သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် အစားအစာအဆင့်အတန်းမီရေး အဖွဲ့က ဤတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ရန် ခုနစ်နှစ် ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်း၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လေ့လာရေးကဖော်ပြသည်မှာ အရက်သောက်သောကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မ မွေးဖွားနိုင်သောကလေးများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ကလေးဉာဏ်ရည် အပြုအမူ စသည်တို့မှာ အဆင့်မမီဖြစ်ကြရသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သြစတြေးလျလူထုကျန်းမာ ရေးဌာန အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် တယ်ရီဆလီဗင်က ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချီးကျူးပြောကြားလိုက်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သြစတြေး လျအမျိုးသမီးများကို အကူအညီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်ဝန်ယူခြင်းကို စဉ်းစားရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ပါက စွန့်စားရမှုများ ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်သေစေသည့်အရက်များ (FASD) ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ပေါ်ထွက် နေကြောင်း ၎င်းက ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာကို ပြောခဲ့သည်။
သြစတြေးလျဆေးအသင်း (AMA)က ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက အသိပေးသည်မှာ တချို့ဒေသများတွင် FASD မမာဏ ၁၂ ဆ ပို၍များနေသည်ကို တွေ့ရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အခြားကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခုက အရက်ပုလင်းမျက်နှာစာတွင် သတိပေးချက်စာတန်းကို မ ဖြစ်မနေ ဖော်ပြပေးရမည်ဟုဆိုသည်။ အရက်သောက်ကိုယ်ဝန် ဆောင်များ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း၊ အရက်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း၊ ကလေးလူစဉ်မမီခြင်းဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အရက်သုတေသနနှင့် ပညာ ပေးရေးအဖွဲ့က ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် လူ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ အရက် သောက်၍ မွေးလာသောကလေးမှာ တစ်သက်လုံး လူစဉ်မမီဖြစ် ဖြစ်သည်ဟု သုတေသနက ဖော် ပြလိုက်သည်။
အစုရှယ်ယာဈေးကွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်နေချိန် တရုတ်က ဒေါ်လာသုံးဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်များ ထုတ်?
တိုင်းဥပဒေချုပ်ဟောင်း ဦးဟန်ထူးပါ ၆ ဦးကို ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်စဉ်က တိုင်စာကို သက်သေခံအဖြ??
ရီးဟားနားကို ဘာဘေးဒိုးစ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခံရသော သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်
ဆွာချောင်း ရေလှောင်တမံ ပဲ့ကျမှုကြောင့် ကျပ်သိန်းပေါင်း လေးထောင်ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့
အာဆင်နယ်၊ ချဲလ်ဆီးတို့ ပွဲချောင်သော ယူရိုပါလိဂ်အုပ်စုများ ထုတ်ပြန်၊ ယူရိုပါလိဂ် အကောင်းဆံ
မုံရွာမြို့အား သရီးဒီမြေကြီးမြေပုံရရှိရန် ဒရုန်းဖြင့်အချက်အလက်ကောက်
အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဥပဒေအတိုင်း အလုပ်ရှင်များမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရေး စုဝေးတောင်းဆိုမှု က